Aranda de Duero: အထိမ်းအမှတ, gastronomy နှင့်ခမ်းနားဝိုင် | ခရီးသွားသတင်း
Aranda က de Duero
လူးဝစ် Martinez | | စပိန်မြို့ကြီးများ, ခရီးသွား
Aranda de Duero သည်ပြည်နယ်၏တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိသည် Burgos။ ဒါဟာသမိုင်းအများကြီးနှင့်အလွန်ကြီးစွာသောအစဉ်အလာနှင့်အတူသာယာဝပြောတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ် စပျစ်ရည်ကိုစိုက်ပျိုး။ တကယ်တော့ဒါဟာ၏မြို့တော်ဖြစ်ပါတယ် Ribera de Duero ဒေသ နှင့်၎င်း၏ကောင်းသောစပျစ်ရည်ကိုတစ် ဦး ခမ်းနား gastronomy နှင့်အတူဖြည့်စွက်။
အဲဒီမှာ Aranda ကောင်စီအနာဂတ် Isabel la Católicaသည်မင်းသမီးလေးဖြစ်နေဆဲပင်။ အလားတူပင်၎င်း၏ပိုင်နက်အပေါ် Aranda မြေပုံ ၁၅၀၃ ခုနှစ်တွင် Simancas ၏သမိုင်းဝင်မော်ကွန်းတိုက်တွင်မည်မျှထိန်းသိမ်းသည်ကိုရှေးအကျဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Burgos မြို့သည်သင့်အားအနုပညာအမွေအနှစ်များ၊ ဝိုင်ကောင်းများနှင့်အရသာကောင်းသည့်ဟင်းလျာများကိုပေးသည်။ Aranda de Duero ကိုသင်ပိုမိုသိလိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့နောက်သို့လိုက်ပါ။
1 အဘယ်အရာကို Aranda de Duero တွင်ကြည့်ပါ
1.1 Santa María la Real ဘုရားရှိခိုးကျောင်း
1.2 San Juan ၏ဘုရားကျောင်း
1.4 Berdugo နန်းတော်
1.6 ဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း Aranda de Duero ၏အနှစ်သာရ
1.8 Aranda က de Duero ၏ပတ်ဝန်းကျင်
2 Aranda de Duero မှာဘာစားရမလဲ
3 Aranda de Duero သို့လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ကားအဘယ်နည်း
4 Aranda de Duero ဘယ်လိုသွားရမလဲ
အဘယ်အရာကို Aranda de Duero တွင်ကြည့်ပါ
Aranda ၏ဗိသုကာအမွေအနှစ်သည်အလယ်ခေတ်မှယနေ့အထိဘာသာရေးနှင့်မြို့ပြအဆောက်အအုံများဖြစ်သည်။ ပြီးတော့မြို့ထဲမှာပြတိုက်များနှင့်ရှေးဟောင်းဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများလည်းရှိသည်။
Santa María la Real ဘုရားရှိခိုးကျောင်း
၁၅ မှ ၁၆ ရာစုအတွင်းတည်ဆောက်ခဲ့သောအထင်ကြီးသောအပြင်ပန်းဖြစ်သည် Elizabethan Gothic တံခါး ၏အလုပ် Cologne ရှိမုန်။ အတွင်းပိုင်းတွင် Mudejar စတိုင်၌လှပသော Renaissance အပြောက်အရံနှင့် Choir လှေကားများတွေ့နိုင်သည်။ ဒါဟာအမျိုးအစားရရှိထားသူဖြစ်ပါသည် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှု၏ပိုင်ဆိုင်မှု.
အဲဒီမှာအတိအကျ Aranda ကောင်စီကျင်းပခဲ့သည်။ ဟုတ်တယ် Gothic ခိုင်ခံ့သောမျှော်စင်နှင့်လည်းတစ် ဦး Renaissance altarpiece ရှိပါတယ်။ ဒါပဲ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှု၏ပိုင်ဆိုင်မှု နှင့်လက်ရှိ၏ဌာနချုပ် Ribera ၏မြင့်မြတ်သောအနုပညာပြတိုက်.
အထက်ပါအချက်များအပြင် Aranda de Duero တွင်အခြားဘာသာရေးအဆောက်အအုံများရှိသည်။ ထို့ကြောင့် Virgen de las Viñas၏ Sanctuary၁၇ ရာစုမှနာမည်တူပန်းခြံတစ်ခုတွင်ရှိပြီးမြို့၏ဤအပျိုစင်၊ နာယကသူတော်စင်၏ပုံရိပ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းအတွက် San Nicolás de Bari ၏ဘုရားကျောင်း ဒါဟာ၎င်း၏ Mudejar coffered မျက်နှာကျက်နှင့်၎င်း၏ Baroque altarpiece အဘို့အထင်ရှားသည်။ The San Pedro Regalado Sanctuary ဒါဟာဆင်ခြေဖုံးမှာတည်ရှိပြီးသင်လည်းသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် San Juan de la Vera Cruz ၏ဘုရားကျောင်း.
ဒီမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်မိသားစုရဲ့နာမည်ကို“ b” နဲ့ရေးထားတယ်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ အရေးကြီးသည့်အချက်မှာဤအဆောက်အအုံသည်အကောင်းဆုံးဥပမာဖြစ်သည် XV ရာစု၏ Castilian မြို့ပြဗိသုကာ။ ၎င်း၏မျက်နှာစာကို ashlar ကျောက်တုံးဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအတွင်းပိုင်းတွင်လှပသောပုံပန်းသဏ္ဌာန်ရှိသည် porticoed ဝင်း နှစ်ဆသစ်သားကော်လံအတူ။
မြို့မှာbrရာမတံတားနှစ်စင်းရှိသည်။ တစ်ခုက သားရေလုပ်သမားတစ် ဦးရောမတံတားဟုလည်းခေါ်သည်၊ တူညီသောယုဂ်မှအခြား, ပိုင်သည် Conchuela တံတား.
ဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း Aranda de Duero ၏အနှစ်သာရ
Aranda de Duero လက်အောက်တွင်စစ်မှန်သည် မြေအောက်ရထားစီးတီး ၁၂ နှင့် ၁၈ ရာစုနှစ်များအတွင်းတူးဖော်ခဲ့သောဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးရာကျော်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဤအလယ်ခေတ်ဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းထားသည့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လက်ရှိအခြေအနေအရမြို့၏မြို့ဟောင်းအရ ၇ ကီလိုမီတာအရှည်ရှိသည့်၎င်းတို့အနက်တစ်ရာနှစ်ဆယ်ခန့်ကိုလည်ပတ်နိုင်သည်။
သင်ရထားများကြိုက်နှစ်သက်ပါက Aranda တွင်သင့်တွင်လှပသောမီးရထားပြတိုက်ရှိပြီးစက်ဟောင်းများ၊ လှည်းများ၊ ယူနီဖောင်းများ၊ ဒါဟာအဟောင်း၌တည်ရှိသည် Chelva ဘူတာရုံ.
Aranda က de Duero ၏ပတ်ဝန်းကျင်
မြို့ပတ်လည်၌သင်လည်ပတ်ရန်ထိုက်တန်သောမြို့များရှိသည်။ On Fuentespina သင့်တွင် San Miguel ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုရှိသောနေရာဖြစ်သောထာဝရဖခင်၏ရသေ့အားရှိသည်။ ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းအတွက် Fords အနုပညာသမိုင်းဆိုင်ရာအဆောက်အအုံအမျိုးအစားနှင့်နီးကပ်စွာတည်ရှိသည်သောမြို့ရိုးကိုပြထားသောမြို့ပြအဆောက်အ ဦး ကိုတင်ပြသည် Santa Cruz de la Salceda Pico Romero သည်ကြေးနီခေတ်မှမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့အတွက် မြစမ်းရေ သငျသညျ San Miguel ၏ Renaissance ဘုရားကျောင်းနှင့် Virgen de la Nava ၏ရသေ့ကိုတွေ့မြင်ရန်ရှိသည်, စပျစ်နွယ်ပင် ၁၂ ရာစုကစပြီး Premonstratensian ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုသင်တွေ့နိုင်တယ်။
Aranda de Duero မှာဘာစားရမလဲ
ကျနော်တို့ Burgos မြို့၏ခမ်းနား gastronomy ဖော်ပြခဲ့ပါပြီ။ အကြိမ်ကြိမ်လည်ပတ်ပြီးနောက်သင်သည်ပုံမှန်ထမင်းဟင်းကောင်းကောင်းစားလိုသည်။ ထို့ကြောင့်သင့်အားဟင်းလျာအချို့အကြောင်းသင်ပြောပြလိမ့်မည်။
စပျစ်နွယ်ပင်များအပြင် Aranda နယ်မြေများလည်းများပြားသည် မှိုနှင့်မှို။ theရိယာ၌ Morel, ဆူးပင်, chanterelles သို့မဟုတ် senderillas ရှိပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်များမူကားသိုးများသည်ထင်ရှားသည်။ အတိအကျ Aranda ၏ပုံမှန်ပန်းကန်တန်းအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် ကင်သိုးသငယ်သို့မဟုတ်နို့စို့သိုးသငယ်။ ဒါဟာအမြဲတမ်း casserole အတွက်ပြင်ဆင်နှင့်သစ်သားမီးဖို၌ချက်ပြုတ်နေသည်။ အလားတူပင်စပျစ်ပင်အညွန့်မှမီးခိုးများပေါ်တွင်ကင်ထားသောခုတ်များသည်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ထိုဒေသရှိထံမှနွေးထွေးသောဟင်းချိုဖြစ်ကြသည် ကြက်သွန်ဖြူ y အဆိုပါ Castilian။ ဒါပေမယ့်သင်ကြိုးစားရမယ့်နောက်ဟင်းတစ်မျိုးကတော့ ဆန်အနက်ရောင် puddingဝက်၊ သွေး၊ ကြက်သွန်၊ ထောပတ်၊ ချက်ပြုတ်သောအခါ, ရလဒ်ဟင်းရည်သို့မဟုတ် အောင်နိုင်သူ ဒါဟာဟင်းချိုများအတွက်အခြေစိုက်စခန်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ဝက်အူချောင်းများထဲတွင်သင်သည်လည်းအရသာနိုင်ပါတယ် Botagueñosမှ chorizos.
အခြားတစ်ဖက်တွင် Aranda ၏ gastronomy တွင်လည်းငါးများလည်းရှိသည်။ သူတို့ကအလွန်လူကြိုက်များကြသည် ငါးရှဥ့် la la Arandina conger နှင့် Bacalao အယ်လ် Ajoarriero။ သို့သော်အားလုံးအထက်တွင်, areaရိယာ၏ပုံမှန်ဖြစ်ကြသည် ကဏန်းမြစ်, အမှန်တကယ်အရသာ။
သင်သည်သင်၏အစားအစာနှင့်အတူလိုက်ပါနိုင်ပါတယ် Aranda ကိတ်မုန့်, မုန့်၏အထူးပုံစံ။ ပြီးတော့အချိုပွဲတွေမှာတော့မင်းမှာခမ်းနားထည်ဝါလှတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ် သိုးဒိန်ခဲ နှင့်ကဲ့သို့ချိုမြိန် မတ်စောက်, Las ဒိုးနတ် နှင့် မျက်စိကန်းသော။ သောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုရန်မလိုအပ်ပါ ဇာစ်မြစ်၏ Ribera က de Duero သတ်မှတ်ရေးမှစပျစ်ရည်ကို.
Aranda de Duero သို့လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ကားအဘယ်နည်း
မြို့က မြေထဲပင်လယ်ရာသီဥတု တိုက်ကြီးဒြပ်စင်နှင့်အတူ။ ဆောင်းရာသီသည်အလွန်အေးပြီးနွေရာသီမှာမူနူးညံ့ပါသည်။ မိုးရွာသွန်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တစ်နှစ်ပတ်လုံးရှားပါးသည်။ ထို့ကြောင့် Aranda de Duero သို့အလည်အပတ်သွားရန်အကောင်းဆုံးအချိန်များသည် နွေ ဦး နှင့်နွေရာသီ.
Virgen de las Viñas၏ Sanctuary
Aranda de Duero ဘယ်လိုသွားရမလဲ
စိတ်ဝင်စားစရာမှာရထားလမ်းပြတိုက်တည်ရှိရာရွာတစ်ရွာသည်ကြီးမားသောမြို့ကြီးများနှင့်တိုက်ရိုက်ရထားလမ်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် Aranda de Duero သို့ရောက်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ၊ အဝေးပြေးလမ်း။ မြောက်နဲ့တောင်ပိုင်းကနေမင်းတို့လုပ်နိုင်တယ် မြောက်ပိုင်းအဝေးပြေးမက်ဒရစ် -Irun။ အဲဒီအစားအရှေ့နဲ့အနောက်ကနေအသုံးပြုတာအကောင်းဆုံး N-122.
အကယ်၍ သင်နောက်ထပ်ဝေးကွာသောနေရာမှလာလျှင်၊ အနီးဆုံးလေဆိပ်သည်အနီးဆုံးလေဆိပ်ဖြစ်သည်ကိုလည်းသင်စိတ်ဝင်စားလိမ့်မည် Burgosအကြောင်းငါးဆယ်မိုင်ကွာသော။ သို့သော်၎င်းထက်လေယာဉ်အသွားအလာပိုမိုများပြားသည် Villanublaတွင် Valladolidဒါကကိုးဆယ်ပါ။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် Aranda de Duero သည်သင်မြင်ခဲ့သည့်အတိုင်းသင့်အားကမ်းလှမ်းရန်များစွာရှိသည်။ ၎င်းတွင်ကောင်းမွန်သောheritageရာမအမွေအနှစ်၊ ခမ်းနားသောအစာအိမ်နှင့်ထူးခြားသောဝိုင်အစဉ်အလာရှိသည်။ Burgos မြို့ကိုမင်းမသိချင်ဘူးလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » Aranda က de Duero